क्याप्टेन अमरको सपना | Narayan Adhikari
उताबाट हुकुमी शैलीमा आदेश आयो ‘फाल्गुन २५ गते बहिनीको बिहे छ। कार्ड केही छापेको छैन। बाबुलाई फोनबाट नै निम्तो भो! जसरी पनि आउनु। तिमीले यो कुरा बुझिराख्नु।’
घरमा कुरो राखी नसकिदै एक्कासी जंगबहादुर जंगिएर भने ‘तिमीले यो कुरा बुझिराख्नु र अमरलाई बुझाईदिनु। यो घरमा अन्तरजातीय विवाह कदापि हुन सक्दैन।’
झण्डैं एक महिनापछि अमरको फोन आयो। फोन उठाउने बित्तिकै एक सासमा भन्यो ‘पर्सि सपनाको अमृत प्रधानसँग इन्गेजमेन्ट हुने भो रे। जसरी पनि रोक्नु पर्यो। केही गर न केटा। म सर्च अप्रेसनमा छु। मलाई यताबाट फर्कन मात्र दे, शाक्य बुढाको घर बाहिर लगेर सैन्य परेड खेलाउछु…’
‘कि लाश चाहियो कि सास? खोजि छिटो हुनु पर्यो।’ बुढा बुरुक्क उफ्रन्थे। प्रहरीले सबै कुरा चाल पाएको थियो र एउटै जवाफ दिन्थे। ‘खोजि तीव्र पारेका छौँ।’
एक्कासी टेलिभिजनमा ब्रेकिङ्ग न्यूज आयो। ‘ललितपुरको लेलेमा भिडन्त, युनिफाइड कमाण्डको एक प्लाटुन चढेको ट्रक माओवादीले थापेको एम्बुसमाु थप जानकारी आउन बाँकी…’
धन्य…! अमर को दाहिने पाखुरामा छर्राले लागेको रहेछ। अमरले सपनाको आँसु पुछ्दै भन्यो ‘तिम्रो सिउँधो नभरेसम्म मलाई यमराजले पनि छुन सक्दैन’
अमरकोमा जाँदै थिएँ। नजिकै रहेको स्टेशनरीमा छिरेर एउटा पत्रिका किनेँ, हेडलाइन थियो ‘माओवादीहरु पश्चिममा भिषण भिडन्त गर्ने तयारीमा…’
तीन जना हामी आफ्नै दुनियाँको गफमा व्यस्त थियौँ। अचानक अमरको मोबाइलमा घण्टी बज्यो। अमर फोन उठाउँदै अर्को कोठामा गयो। सन्देश आयो, अमरको सरुवा कालिकोट…!
‘कंचन बग्ने तिला नदीको किनारमा छौँ। कर्णाली जोड्ने बाटो खन्दैछौँ। यी कर्णालीका पहाडहरु जति हेरे पनि धित मर्दैन। लाग्छ म सँधै यही बसौँ… सपनालाई सम्झाई राख्नु है।’
यत्रतत्र छरिएका लासहरु। डढेका घरहरु… स्थानीयहरुको रुवाबासी। मानौँ म सौम्य कर्णालीमा होइन, इराक, अफ्गानिस्तानमा छु…
भारि मन लिएर त्रिशुली गएँ। मनभरी अमरको याद आयो। अमर बितेको पनि झण्डै दश वर्ष भईसकेछ। वास्तवमा म धेरै गलिसकेको थिएँ। फेरि आफैले सम्झाएँ, बहिनिको बिदाईमा मैले दाजुको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। ‘तिमी पनि अमर जस्तै छोरा हो। आफ्नो कर्तव्य कसरी भुल्न सक्छौँ?
अबरुद्ध गलाले भन्दै थिए ‘सपना मेरी छोरी हुन्। समाजले विधुवा बारे के भन्छ? अब मलाई मतलब भएन। छोरीको कन्यादान गरेँ। तिमीले यो कुरा बुझिराख्नु।’
← गुप्तचर बलियो बनाऊ